Electric na etona Heat Hot Air Sakafo namaoka Machine - China Qingdao milina tapaka
Electric na Steam Heat Hot Air Sakafo namaoka Machine Tena mety ho an'ny asa-paharitry ny hena sakafo rehefa hiteraka hafanana avo, legioma vokatra, fonosana plastika kely vokatra na vacuum fonosana vokatra. Ny sakafo dia apetraka eo amin'ny Stainless vy fehikibo lamba (izay atao amin'ny 12-60 volovolo Stainless vy harato), ny varavarana lamba dia nampihetsi-po nivoaka fehin-kibo, ary niverina tao-paharitry boaty. Ny tena fomba fanafanana ny herinaratra fanafanana, etona fanafanana sy rivotra mafana fanafanana. Ny rivotra mahamay afaka mandeha ...
Electric na Steam Heat Hot Air Sakafo namaoka Machine Tena mety ho an'ny asa-paharitry ny hena sakafo rehefa hiteraka hafanana avo, legioma vokatra, fonosana plastika kely vokatra na vacuum fonosana vokatra.
Ny sakafo dia apetraka eo amin'ny Stainless vy fehikibo lamba (izay atao amin'ny 12-60 volovolo Stainless vy harato), ny varavarana lamba dia nampihetsi-po nivoaka fehin-kibo, ary niverina tao-paharitry boaty. Ny tena fomba fanafanana ny herinaratra fanafanana, etona fanafanana sy rivotra mafana fanafanana. Ny rivotra mahamay dia afaka hiampita amin'ny banga ny sakafo, ny etona dia hofiazany setroka avy amin'ny lavaka hamandoana. -Paharitry efajoro dia ahitana ny faritra maro, raha te ho afa-toerana, ny fanafanana faritra dia azo atao toy karazana maro sosona. Ny lavany dia 6-40m isan-karazany, ny sakany dia 0.6-3m mahomby.
Previous: Nalona legioma Processing Machine-dalana,
Manaraka: Water Bath price Milk Pasterization Machine
rivotra paharitry milina
akondro poti vacuum vilany fandrahoana milina
mangahazo milina vilany fandrahoana
akoho milina vilany fandrahoana
poti vilany fandrahoana milina
mitohy vilany fandrahoana milina
lalina vilany fandrahoana milina
atody vilany fandrahoana milina
atody vokatra fikarakarana tsipika
trondro vilany fandrahoana milina
sakafo rivotra paharitry milina
sakafo malefaka kitapo rivotra paharitry milina
sakafo fonosana fanadiovana paharitry milina
sakafo fonosana mafy rivotra mangatsiaka paharitry milina
sakafo fonosana ambonin'ny rivotra paharitry milina
frantsay fries vilany fandrahoana milina
voankazo sy legioma paharitry milina
voankazo vacuum vilany fandrahoana milina
vilany fandrahoana poti-milina
vilany fandrahoana milina
vilany fandrahoana milina ho an'ny tsakitsaky
vilany fandrahoana milina sakafo maivana sakafo
gari vilany fandrahoana milina
orinasa vilany fandrahoana milina
KFC milina vilany fandrahoana
onion vilany fandrahoana milina
voanjo vilany fandrahoana milina
harona plastika fonosana fanamainana
Kisoa hoditra vilany fandrahoana milina
sakafo maivana sakafo vilany fandrahoana milina
vacuum vilany fandrahoana milina
vacuum vilany fandrahoana milina vidin'ny
Sakafo am-bifotsy Processing Autoclave avalin'izy Sterili ...
Pot telo Parallel Processing Type Sakafo avalin'izy ...